Ziyini izinsuku zenhlanhla yomdlavuza? - Novemba
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Ikhalenda Lezinsuku Ezinhle Zomdlavuza ngoNovemba
Izinsuku Zenhlanhla: Kubhekwa iSonto noMsombulukoizinsuku zenhlanhla yeCancerabomdabu.UnenhlanhlaUmbala: Okumhlophe, ukhilimu, okubomvu nokuphuzi kulethainhlanhlanokuchuma kumaCancer.
Umdlavuza wenziwa ngamaseli, njengakho konke okunye. Isigaxa somdlavuza simane nje siyisiqoqo samaseli ayahlubuka. Kukhona izigidigidi zamaseli emzimbeni womuntu (ukulinganisa kusuka ku-15 kuye ku-70 trillion, kunzima ukusho ngokuqinisekile).
Wonke la maseli enza amakhophi awo, aziphindaphinda futhi akopishe i-DNA yawo ngaso sonke isikhathi. Futhi njengoba sifuna, akukho lutho oluphelele. Kwesinye isikhathi bavele bahlubuke ngokwemvelo baphenduke umdlavuza.
Ake sihlukanise lokhu ukuze sonke sibe ekhasini elilodwa. Amaseli ahlukene aphindaphindeka ngamazinga ahlukene - ingqamuzana elibomvu legazi liphila cishe izinyanga ezine, iseli lesikhumba liphila amasonto ambalwa, futhi amaseli kukholoni aphila kuphela izinsuku ezimbalwa esengidlule kuzo cishe izizukulwane ezingama-4600 zamaseli wekoloni! Kuyahlanya lokho! Lapho uneminyaka engama-70 wawusunamakholoni amasha acishe abe yizinkulungwane eziyisithupha nohhafu izigidi eziningi zamaseli kukholoni zihlukanisa izinkulungwane eziyisithupha nohhafu ngezimbungulu ezincane ezivela lapha nalaphaya akumangalisi ukuthi amangqamuzana abe angajwayelekile.
Isikhathi esiningi, uma ukhuluma ngokuvimbela umdlavuza, uzozwa ukuthi ungayidli kanjani inyama esetshenzisiwe, yi-carcinogenic! Ungabhemi, ukuqhuma kogwayi kubangela umdlavuza wamaphaphu! Hlala elangeni ngoba ukukhanya kwe-UV kukunikeza umdlavuza wesikhumba! Futhi konke kuyiqiniso! Kepha yonke le mdlavuza yenzeka ngesizathu esifanayo.
Kalula nje, izinhlanganisela zentuthu noma inyama evela ekusetshenzisweni noma emisebeni ye-UV evela elangeni - konke kuphazamisa i-DNA kumaseli akho. Uma i-DNA yakho ekhulekile kuyo kwesinye isikhathi ingashintsha ngendlela yokuthi ibe ngumdlavuza futhi ingenzeka ngaphandle kwamathonya angaphandle.
Ukuguquka kwezakhi zofuzo kwenzeka ngokwemvelo! Ngakho-ke, eminyakeni emibili eyedlule, kwaphuma iphepha elalisho ukuthi iningi lomdlavuza e-US alizange libangelwe ukubhema noma ukuvezwa kwe-UV noma izinto zokuphila - kepha kwabangelwa ukuphindaphindeka kwe-DNA yakudala. Kwesinye isikhathi umdlavuza uyenzeka nje ...
Leli phephandaba lithi yize amaphesenti angama-40 omdlavuza angavinjelwa ngezindlela zokuphila ezinempilo, ezinye izimbangela zomdlavuza kwakuyizici ezizuzwe njengefa noma nje inhlanhla eyisiphukuphuku. Izinkinga nje ngengxenye yokuphindaphindeka kwamaseli ngoba yenziwe e-US kuphela. Impilo yabantu e-United States ayifani neyabantu kuyo yonke indawo - akulula ukujwayela bonke abantu emhlabeni, akunjalo? Ilungile.
Ngakho-ke ososayensi bezwa ukugxekwa baphinde benza isifundo sonke futhi. Kuthathe iminyaka emibili. Ngalesi sikhathi, bafake imininingwane evela emazweni angama-69 futhi bangeze nomdlavuza owengeziwe! Bathola into efanayo. Amaphesenti angama-66 omdlavuza ayenzeka nje.
Okunye kwakuyizici zemvelo, ukukhetha indlela yokuphila, kanye nezakhi zofuzo. Isibonelo: Iningi lomdlavuza wobuchopho ne-prostate, kanye nomdlavuza ezinganeni, ubangelwa amaphutha wokukopisha i-DNA - ngenkathi eminye imidlavuza yamaphaphu ingokwemvelo kakhulu! Ngakho-ke, UNGABHEMA. Kepha futhi, yikes yezingane.
Cishe akumangazi, kepha odokotela abaningi abanelisekile ngaleli phepha. Singawelapha kanjani umdlavuza lapho umdlavuza uyingxenye ejwayelekile yomjikelezo wokuphindaphindeka kwe-DNA? Ngiqonde ukuthi, usenganciphisa ingozi yakho cishe cishe isigamu ngokuphila impilo enempilo, kepha kuwo wonke - umdlavuza kungenzeka ungabaleki kwabanye.
Ngenxa yalokhu, ngaphezu kwenkulumo ephathelene nokwelashwa, kudingeka sigxile ekuqondeni umdlavuza. Ungaphulukisa umdlavuza njengesibonakaliso, kepha awukwazi ukwelapha ukuguqulwa komdlavuza ngaphandle kwesayensi eningi. Uma sicabanga kuphela ngomdlavuza njengaleli gciwane elenzeka kubantu abangeneshwa noma ngeshwa, lapho-ke asizinaki izibalo ezimsulwa zokuphindaphindeka kwe-DNA.
Asithembekile kithi uqobo. Umdlavuza uyabhema. Kepha futhi kuyingxenye ejwayelekile yempilo kule planethi, futhi njengakho konke okunye - uma sisheshe sikwemukele futhi sikuqonde, kungcono lapho sonke sizothola ukuthi sonke sikwenza kanjani ngokukhethekile ngenxa yomxhasi wethu I-Domain dot com.
Uma uthenga igama lesizinda kusuka ku-Domain Dot Com, uthatha izinyathelo zokuqala zokwakha ubunikazi nombono womkhiqizo wakho. Akunasandiso sesizinda esizotshela indaba yakho njengegama le-DOT COMOT noma le-DOT NET -Domain. Thola isephulelo esingu-15% samagama wesizinda ashibhile Domain Dot Com g nokusingathwa kwewebhu lapho usebenzisa ikhodi yesigqebhezana SEEKER ekuphumeni.
Uma umdlavuza kungamaseli nje futhi nezilwane eziningi zithola umdlavuza, ngiyazibuza ukuthi ngike ngawudla yini umdlavuza? Ingabe uke wacabanga ngakho? Ngakho-ke okwedlulele. Futhi izinto ezinengekayo engingakaze ngizicabange, umkhiqizi wethu uMatt ubuze, 'Inyama yomuntu inambitheka kanjani nokuthi iyiphi ingxenye yethu enomsoco kakhulu?' Thola lapha. Sicela ubhalise, ngiyabonga ngokubuka.
Ngabe u-2021 unyaka omuhle womdlavuza?
Umdlavuzazilungele ukwelashwa ngaphakathi2021. Ubudlelwano buzovivinywa kepha buphume buqine, uzothatha izinyathelo ezinkulu zomsebenzi, futhi nezimali zinamandla okungena endaweni. Lokhu yikuhlei-horoscope kunoma yikuphiunyaka, kepha kuyamangaza kancane ngemuva kwakho konke okubekezelele ngo-2020.29. 2020.
Ngibonga kakhulu kuBrilliant ngokuxhasa lesi siqephu seSciShow. Vakashela i-Brilliant.orgSciShow ukubona ukuthi ungamnika kanjani ukufunda umuntu omthandayo! Abantu bavame ukuzibuza ukuthi kungani lisekhona ikhambi lomdlavuza.
Impendulo imvamisa ngoba 'umdlavuza' akuyona into. Yileso sikhathi esikhulu sesambulela sezifo eziningi ezahlukahlukene ezenza ukuthi amaseli aphume esandleni. Yize kukhona ukwelashwa kweminye imidlavuza, izinhlobo ezahlukene zomdlavuza, zihluke ngokwanele ukuthi akukho lutho oluzonisebenzela nonke - hhayi i-panacea.
Kepha kuvela ukuthi kungaba khona eyodwa? Abaphenyi baseCardiff University eWales kungenzeka ukuthi bathole indlela yokwelapha wonke umdlavuza, noma okungenani lonke uhla lwawo. Futhi bavele bakhubeka ngayo. Abaphenyi abazange babheke ukwelashwa komdlavuza.
Babheka izindlela zokulwa namagciwane anamaseli omzimba abizwa ngokuthi ama-killer T cell. Njengoba igama liphakamisa, lawa maseli abulala izinto. Ikakhulu, izinto ezingenzi umzimba wakho kahle, amanye amaseli omzimba awenzi.
Esikhundleni salokho, babuza amangqamuzana omzimba uqobo bese bezama ukuhogela labo okungenzeka bafihle amagciwane kuwo. Futhi lapho bethola iseli elinegciwane, bayasibulala. Kepha akuwona wonke amangqamuzana e-T killer ukuthi kunezinhlobo ezahlukahlukene ezisebenzisa amaprotheni ahluke kakhulu abizwa ngama-receptors ukuze ahlole amaseli.
Imvamisa lawa ma-receptors athize ngokuthe ngqo kumuntu ozifunayo. Kepha abacwaningi babefuna uhlobo lwe-T cell oluningi. Badonse amaseli ama-T killer amaningi kumasampula egazi futhi bahlola ikhono labo lokuthola izifo.
Isivivinyo iqembu elisetshenzisile senzekile sisebenzisa uhlobo oluthile lweseli lomdlavuza amagciwane angalthelela kalula. Amaseli we-T akhombise isithembiso lapho ososayensi bewakhulula kulawa maseli omdlavuza onegciwane. Kodwa eyodwa yayingacabangeli ngokukhethekile.
Ngeshwa, ekuhlolweni okuqhubekayo, wabulala wonke amangqamuzana omdlavuza, hhayi lawo kuphela anamagciwane kuwo - ngakho-ke kwakungekhona ababekufuna. Kepha kwavusa ilukuluku labo. Hhayi-ke, akumangazi ukuthi iseli lika-T libulale amangqamuzana omdlavuza, ngoba ama-T cell awagcini nje ngokuzingela ukutheleleka.
Bakhona futhi. Eminyakeni yamuva nje, ososayensi baqale ukusebenzisa amandla alawa maseli ukulwa nomdlavuza. Isibonelo, i-CAR-T immunotherapy isusa ama-T cell emzimbeni womuntu ahlelwe ngofuzo nge-receptor ekwazi ukuthola umdlavuza womuntu bese ewufaka futhi ukuze awuthole futhi awubhubhise.
Kepha asikwazi ukukwenza lokhu kuzo zonke iziguli ezinomdlavuza okwamanje ngoba asinazo izinhloso ezinhle zokwamukela zonke izinhlobo noma ngisho nomdlavuza omncane. 'Umdlavuza awudalwanga wonke ulingana.' Kepha ngiyaphuma.
Iqiniso ukuthi, akumangazi kakhulu ukuthi abacwaningi bathole i-T cell eyabulala lolo hlobo lomdlavuza, kanye namangqamuzana abulala ama-bacterium T, banquma ukubona ukuthi amanye amanye umdlavuza nawo asebenza kanjani, ngokumelene nabo bonke wabo. Umdlavuza wamakholoni, umdlavuza wethambo, umdlavuza webele, umdlavuza wegazi, umdlavuza wesikhumba lawa maseli we-T abulala lonke uhlobo lomdlavuza abacwaningi abazama.
Akugcinanga lapho, kepha bashiye amaseli aphilile wodwa. Kuyinto efana no-WHOAH. Akudingeki ukuthi kushiwo, lokhu kwavusa uphenyo olusha lokuthi la maseli we-T enza kanjani.
Ukuze bathole, abacwaningi basuswe ngeCRISPR. eyodwa ngemuva kwamanye amaprotheni avela kumaseli omdlavuza -Cas 9 ukuhlela izakhi zofuzo. Umqondo bekuwukuthi uma ukususa iprotheni kwenza ama-T cell angasebenzi, lelo protein kufanele libandakanyeke ekutheni amaseli awubona kanjani umdlavuza.
Futhi lokho kubaholele kuphrotheni ebizwa nge-MR1 okusho ukuthi i-MR1 ingatholakala kuwo wonke amaseli akho, hhayi amangqamuzana anomdlavuza kuphela. Uyabona, kubhekwa njengohlobo oluthile lwama-immune system olunolwazi. Ithatha ama-molecule ngaphakathi kweseli bese iwethula ngaphandle, lapho amaseli omzimba angangenelela khona, futhi yilokho okubonakala sengathi lamaseli we-T killer abonakala enza.
Bane-receptor ekhethekile ebavumela ukuthi bahlanganyele namaprotheni e-MR1 futhi bafunde la masampula. Akuwona kuphela amaseli we-T asebenzisana ne-MR1, kepha kubonakala sengathi yiwo kuphela esiwatholile kuze kube manje angathola zonke izinhlobo zomdlavuza. Abaphenyi bakwazile nokuthatha le-receptor bayifaka ku-T - Faka amaseli ezigulini zomdlavuza zangempela.
Ngakho-ke umqondo ofanayo nowokwelashwa kwe-CAR-T, kepha ngale protein eyodwa esikhundleni sokwenza amaseli we-T abe nomdlavuza othize wesiguli ngasinye. Futhi lawa maseli we-T asetshenzisiwe awagcini nje ngokubulala amasampuli ezinhlungu zeziguli, abulala nomdlavuza ezigulini eziningana. Lokhu kungenzeka ngoba amaprotheni e-MR1 awahlukile ngempela phakathi kwabantu, ngakho-ke umamukeli ofanayo angababona bonke.
Esikhundleni sokwenza izindlela zokwelapha zomdlavuza ngamunye, odokotela bangasebenzisa leyo receptor eyodwa ukwenza ama-T cell, asebenza kuwo wonke umuntu. Kepha akumele sivule i-champagne okwamanje. Kukhona okunye okungaziwa okukhulu lapha. t Abaphenyi abazi kahle ukuthi amaseli we-T abona kanjani i-MR1.
Ngokuzimisela, amagama wangempela emsebenzini ukuthi lesi silinganiso se-receptor 'asiboni i-MR1 ngezindlela ezaziwayo'. Futhi abazi ukuthi yini i-MR1 ekhombisa amaseli we-T ukuwenza azi ukuthi iseli linomdlavuza - yize kungenzeka ukuthi livela kuphela kuma-cancer futhi, uma kungenjalo emhlabeni jikelele, lijwayelekile kakhulu. Okubaluleke kakhulu, kusamele uzame lawa maseli we-T ezigulini ezingabantu ezingokoqobo.
Bazihlolela amagundane ebusweni bomdlavuza wabantu, imiphumela yayithembisa. Kepha kusenokwenzeka ukuthi ngeke basebenze kahle kumuntu wangempela, ophilayo. Kufanele sazi kungekudala.
Uhlelo lwamanje lwabaphenyi ukuqhubeka ngokuqapha, futhi uma izivivinyo zokuphepha zihamba kahle, banethemba lokuthi izifundo zabantu zingaqala eminyakeni embalwa ezayo. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlola lawa maseli we-T kungasiza ososayensi ukuthola izindlela ezintsha zokwelapha izinhlobo eziningi zomdlavuza, noma ngabe lokho kungahumushi kube ikhambi “lokwelapha umdlavuza”. Futhi iqembu selivele lifuna amanye, afana nalawo angabulala umdlavuza amaningi.
Futhi ukucabanga - lokhu kutholakala bekungeke kwenzeke uma abacwaningi bebengenabo ubuchopho bokuphenya ngokuqhubekayo lapho amanye amaseli enza okuthile okuhlekisayo. Siyabonga ngokuhlola lesi siqephu sezindaba zeSciShow Futhi sibonga uBrilliant ngokuxhasa isiqephu sanamuhla. I-Brilliant inikeza izifundo kusayensi, ubunjiniyela, isayensi yamakhompyutha nezibalo.
Futhi zonke ziyasebenzisana futhi zisebenza ngezandla, ngakho-ke ukufunda kumnandi. Isifundo sakho seComputer Science Fundamentals sikulethela kuma-algorithms ngaphandle kwemininingwane eyisicefe yolimi lohlelo. Kodwa-ke, uma usulungile, bazoba nePython eyakhelwe esipheqululini ukuze uvivinye amakhono akho wokubhala we-algorithm osanda kuwathola.
Futhi kungenye yezifundo eziningi ongazithatha ngokubhaliselwe kwe-premium. Noma unganikeza umuntu omthandayo isifundo - uSuku Lwezithandani, angithi. Ngakho-ke uma unentshisekelo - wena noma lowo muntu okhaliphile, okhethekile empilweni yakho - joyina iBrillian t.orgSciShow futhi uzothola isaphulelo esingamaphesenti angamashumi amabili ekubhalisweni kweprimiyamu yonyaka.
Injani inyanga yomdlavuza wezinkanyezi?
Ngaphansi kwezindawo ezishisayoizinkanyezi, ILanga lihamba kule ndawo phakathi cishe kukaJuni 22 noJulayi 22, nangaphansi kohlangothiizinkanyezi, ILanga lihamba kule ndawo phakathi kukaJulayi 21 no-Agasti 9. Ngoukufundwa kwezinkanyezi,Umdlavuzauphawu oluyikhadinali lwe-trigon yamanzi, olwakhiweUmdlavuza, IPisces neScorpio.
Namaste futhi wamukelekile ekwelapheni kukaSonali Joshi's Astrojyoti. Kulesi sihloko sizobona ukuthi inyanga kaJulayi injani ngophawu lweCancer. - Moon on Cancer, Ascendant on Cancer, noma uvumele uKirk Rashi abuke le ndatshana ukuze abone ukuthi izowuthinta kanjani umsebenzi wakho, impilo yomndeni, ukubambisana kwethu, nokuthi yikuphi ukunakekelwa okufanele ukuthathe kule nyanga.
I-horoscope yokuqala kukaJulayi ibukeka kanjena. Ama-nakshatra asebenzayo asefayilini. Ake sibone ukuthi amaplanethi ahanjwa kanjani ngasekupheleni kukaJulayi, i-horoscope izobukeka kanjena.
Njengoba ukwazi ukubona, uVenus uzokhokhiswa ngasekupheleni kukaJulayi. Futhi ungathola ukuthi kunezihlanganisi ezithile ezingaba nzima impela. Uma uneNyanga kuCancer, i-Ascendant kuCancer, amanye amaCancer angamaplanethi amakhulu kwiCancer, khona-ke udinga ukukhumbula ukuthi udinga ukuqaphela kuzo zonke izibalo, uhlele ekuqaleni kwenyanga, ungathola imiphumela emihle ekuqaleni , kepha Njengoba inyanga iqhubeka, kufanele uqaphele kakhulu ukuthi yonke inzuzo nokuhlela kuzokusiza wenze okungcono kakhulu empilweni yakho futhi ungazibeki engcupheni engadingekile.
Ungaba nokuhamba kwemali okuhle ekuqaleni kwenyanga, kepha empeleni kufanele uqaphele, futhi kufanele usebenzise amaqhinga wokuxhumana ekubhekaneni nabaphathi bakho, umsebenzi ohlobene nohulumeni, nanoma yikuphi lapho iziphathimandla zikuhlola khona noma zibukeza umsebenzi wakho okuhlobene nezinkinga Ama-ejensi kaHulumeni noma abaphathi bakho njll ancishiswa njengoba usuku luqhubeka. Kodwa-ke, bekufanele uqaphele kakhulu ekuqaleni.
UVenus uhamba nge-webinar angene endlini yesibili. Lokhu kusho ukuthi isithombe sakho senhlalo sisonke sihle. Uthola Imithi ehlobene nempilo.
Noma ngabe ufuna ukusebenzisana. Bangakusebenzela nawe. Uma uVenus engena endlini yesibili, uzothola enye imali engenayo noma izinsizakusebenza.
Mayelana namaphrojekthi wakho womsebenzi wakho. Ngokuvamile ekusebenzelaneni nabesifazane. Abantu sibathanda futhi siyabahlonipha.
Lokhu kuzoqinisekisa ukuhamba kwemali nokwenyuka kwemali engenayo nonke eninomdlavuza. IMars ihamba phezu kwenyanga yakho eyehlisa izinkinga eziningi, ikusiza ngokukwenza uqinise amandla, wenze imisebenzi yakho, uyithathe yonke, wenze izivivinyo ezintsha, ushaye ijimu noma yini evunyelwe kuya ngokuthi uhlala kuphi. Lapho iMars ingena endlini yesibili ingavula imali entsha yokwenza amathuba, kepha kufanele uqaphele kakhulu njengoba ulimi olisebenzisayo luthinta inani lembuyiselo.
Ungayisebenzisi le Mars, ukhohlise abantu, sebenzisa le ngxenye. Yondla abanye, ukhuthaze abanye, kanti abanye bazobona ukuthi noma yini eyeqisayo iyancishiswa ngokuya ngokubambisana, ukusebenzisana kwezebhizinisi, ukwenzelwa amakhasimende. Konke okuphelelwe yisikhathi kuyasuswa, futhi yisikhathi esihle sokugxila ezinhlelweni mhlawumbe ezimbalwa, ukubambisana okumbalwa kuze kufike ebhizinisini, kepha okubaluleke kakhulu.
Sebenzisa lesi sikhathi ukugxila kakhulu emandleni akho ngenyanga kaJulayi Kirk R Ashi noma abantu abazalwa yiCancer banake eminye yemizamo esiyenzile. Futhi-ke qiniseka ukuthi utshala imali noma utshala imali kukhiye ofanele, ngoba lapho ithuba likhona. Kuyinto emoshwayo Ijubane seliqalile ngakho-ke lihamba kancane, ukuqaphela kuhlala kusiza kakhulu lapho usebenza emkhakheni wokungenisa / ukuthekelisa ezindaweni ezihlobene nenqubomgomo yezangaphandle.
Ingasebenza ekuqaleni kwenyanga. Kodwa-ke, njengoba inyanga iqhubeka, ungahle ubone ukuthi kukhona okwehlelayo nokwehla futhi uzokwaziswa Ngisho nalabo abasebenza emkhakheni wezobuciko, umculo noma ifilimu.
Kufanele uqaphele ngoba ezinye zezinto ezimbi kakhulu zichitheka futhi uzilungiselele. Kodwa-ke, kubantu bendawo abanomdlavuza ekuhambeni. Le yinyanga enhle yokuthola usizo kubantakwenu abadala, abangani, imibuthano yenethiwekhi futhi uthole okuningi kubo.
Khumbula njalo ukuthi ubungani buyavumelana. Ngakho-ke lapho kuyithuba lakho lokusiza, kodwa sebenzisa le nyanga ukuze uvune wena futhi ulisebenzise ngokugcwele. Kuze kube yizinsuku lapho kufanele uqaphele kakhulu.
Izinsuku zibaliwe. Lapho ufuna ukwenza into ebaluleke kakhulu kuwe. Mhlawumbe izingxoxo zomsebenzi, mhlawumbe ukuqala iphrojekthi entsha.
Izinsuku ezinhle kakhulu ziqala ngalezi zinto ngenkathi siselapha. Ngiyethemba ukuthi ibhizinisi lizokusiza ukuthi uthole isifunda ngaphansi kwezinsuku kufanele uqaphele. Qaphela kakhulu.
Sizokusiza ukunciphisa ukulahlekelwa kwakho, ngoba uKirk ngibona ikhambi elingcono kakhulu ukuhamba amabanga amade, eduze kwamanzi, ukuthola imithombo yamanzi. Uma uhlala ukhona noma unebhishi eduze kwedolobha, vakashela lapho kungenzeka khona. Lapho ukuvakasha kungenzeki, ungenza amanzi okucabanga ngemizila yamanzi, uqhube isigqi, ukhathalele, ukhulise izinhlangothi zethu ezinhle zomuntu, ngenkathi uqondisa imizamo yakho kulolu hlangothi, ukuthola ukukhohlisa okungokomzwelo okungcono kakhulu, ukuthatha okuthile kwabanye kuyicala elibi Womdlavuza.
Ungavumeli uhlangothi olubi luqale ngakho-ke akudingeki uzenzele wena. Yabelana ngale ndatshana nabangane bakho, omakhelwane noma izihlobo babe nomdlavuza omkhulu bakhohlwe. Njengale ndatshana, njengoba uhlangabezana namazwana.
Namaste, ngiyabonga. UShubham astu.
Umdlavuza uzoshada nobani?
Ngokuqondene neScorpio, nobabili ninokufana okuningi. Nobabili ninamasu amaningi, kodwa ninenkani. Usuvele uyakwazi okufunayo futhi awudingi ukuzwa okunye ngakho.
Ngenxa yalokhu, uzoba umentshisi we-Aquarius, iLibra, ne-Aries. Izikali zivame ukukunika ukuqina. Udinga ibhalansi ethe xaxa empilweni yakho.
Ngenxa yalokhu, abantu abanjengoScorpio, iTaurus, neCapricorn bafaneleke kakhulu kozakwethu. Lapho beqala ukuthandana, iScorpio siba yiparanoid njengawe. Awuqinisekile ukuthi basengakuthemba yini okwamanje, futhi kuzothatha umsebenzi othile.
NgeCapricorn, usebenzelana nokusayina kwakho. Kepha nobabili nizinikele ekwenzeni imisebenzi yenu, ngakho-ke yinto enifana ngayo leyo. Ungahle ududulane ukuze ufeze izinhloso zakho.
Leo (Julayi 23 - Agasti 22) Uma uyiLeo unentshisekelo enkulu. Uyakuthanda ukwenza futhi awusabi ukuzethula. Ngenxa yalokhu, zilungele kangcono ama-Aries, iSagittarius, neLibra.
Umuntu abangaba naye ezingeni lomzimba nelingokomzwelo. Kungakho zilungele kahle izimpawu ze-zodiac ezinjengeGemini, i-Aquarius, neSagittarius. Njengoba uGemini ekuthanda ukufunda, cishe bazokujabulela ukukhuluma nawe njengoba nawe ukujabulela ukuhlangabezana nezinto ezintsha nezijabulisayo.
ILibra inobungani futhi izimisele ukubeka abanye ngaphezu kwabo. Lolu hlobo lokuzidela luzoheha u-Aquarius. Unentshisekelo yokwenza okuthile emphakathini wabo; I-Sagittarius izokugcina uqinile.
Isimo sabo sengqondo esihle kanye nokuhleka kwabo kubanikeza izinga eliphansi lomhlaba elibenza babe omunye umuntu ozobhinca umlingani womphefumulo. Ngaphambi kokuthi siqhubeke, unazo yini izinkinga zempilo? Bheka Izimpawu Ezi-9 Zengcindezi Ephakeme Yegazi Ongafanele Uzibe Manje emuva engxoxweni yethu yezimpawu zezinkanyezi nokuthi zilungele bani ...
IScorpio (Okthoba 23 kuya kuNovemba 21) Uma ungaphansi kwale watermark, kungenzeka ukuthi unobuhlakani futhi uyathanda. Udinga futhi ukuxhumana okusondelene nomlingani wakho. Ngenxa yalokhu, zihamba kahle kakhulu neCancer, iCapricorn, neTaurus.
I-Taurus, isibali sakho esiphikisayo, izinikele kakhulu. Uyakhumbula ukuthi ngakhuluma kanjani ngokunamathela emsebenzini nokuqhubeka nezinto? Lokho kuhlobene nokuthembeka kwakho kuSagittarius (Novemba 22nd - Disemba 21) Uma uyiSagittarius uthanda ukuzijabulisa. Ufuna umlingani ohlanganyela ukomela kwakho i-adventure nemizwa yakho yamahlaya.
ICapricorn ihamba kangcono ngeVirgo, Taurus, neCancer. Umdlavuza uzokukhombisa ukwesekwa kwabo okugcwele. Uma ufuna ukufeza okuthile, balungile eceleni kwakho.
Imvamisa uzobezwa behlanganyela engxoxweni ezuzisayo. ILibra, iGemini, neSagittarius zihambisana kahle. ILibra inentelezi ethile.
Umuntu ohambisana neyakho kanye nemizwa yabo ungumlingani womphefumulo ofanele. Yebo, ngokuqinisekile kuzoba nokusonta okuningi nokujika uma kukhulunywa ngophawu lwezinkanyezi. Ngiyaqiniseka ukuthi ngiyibhebhile intshisekelo yakho.
Asiqhubeke nengxoxo bese sibuka ezinye izindatshana. Bheka indatshana yethu echaza ukuthi iziphi izimpawu ze-zodiac ezingakwazi futhi ezingakwazi ukugcina imfihlo. Bheka futhi nendatshana yethu mayelana nesitha sakho esibi kunazo zonke kusibonakaliso se-zodiac.
Uyini umsebenzi omuhle womdlavuza?
Imisebenzi emihle yeCancer ifaka phakathiummeli, umnakekeli, udokotela, umhlengikazi, uthisha, usonhlalakahle, umpheki, umhleli wokuqukethwe namanye ama-freelancers wokudala, umhlinzeki wokusekelwa kwezobuchwepheshe, njalonjaloishumi nanhlanu. 2019.
Ingabe umdlavuza ulungile embhedeni?
Umdlavuzazilukhuni ngaphandle kodwa zithambile ngaphakathi. Kuzothatha okungaphezulu kakhulu kokubuka okufudumele nokukhuluma kamnandi ukuthola i-Umdlavuzaungeneumbhede. Kepha uma usukwenzile, uzokwelashwa ngesipiliyoni socansi esingafani nanoma yisiphi esinye. Njengenkalankala,Umdlavuzazinzima ngaphandle kodwa zithambile futhi zithambile ngaphakathi.19. 2020.
Iyiphi inombolo yenhlanhla yeCancer 2021?
I-CANCER: (JUNI 21- JULY 22)
Inombolo4 futhi imibala ecashile efana nomhlophe-omhlophe izoletha okuhleinhlanhlakuwe. Isibonakaliso sakho sibuswa yiNyanga. Okwakhounenhlanhlaamagama angama-D, no-H.6
Uyini umbala owuthandayo womdlavuza?
Uma uyiUmdlavuza, yakhoumbala owuthandayouMhlophe!13 2020.
Ngubani umdlavuza we-soulmate?
IVirgo mhlawumbe iyona enkulu kunazo zonkeumphefumulongobaUmdlavuzangoba zenzelwe nje omunye nomunye. Banokuxhumeka okungokomzwelo okuqine kakhulu. Amakhono abo wokuxhumana, nokwethembana kufana kahle.28. 2020.
Ingabe zikhona izinsuku ezinhle noma ezimbi zomdlavuza?
Ithuba, uthando, idumela, imali, nezinsuku eziyinselele zesibonakaliso seCancer ngoMeyi. Ikhalenda elilandelayo likhombisa izinsuku ezinhle / ezimbi ezingaba khona zeCancer Suns kanye ne-Cancer Ascendants. Bheka futhi iCancer Daily Horoscope neCancer Monthly Horoscope. Amakhalenda Wezinsuku Zokuzalwa Eziningi Ezinhle (Zezimpawu Ezihlukile):
Ingabe ikhona inyanga yokuqwashisa ngomdlavuza ngoNovemba?
UNovemba wumdlavuza wePancreatic, umdlavuza wamaphaphu, umdlavuza wesisu kanye nenyanga yokuqwashisa ngomdlavuza weCarcinoid. UNovemba ubuye kube yinyanga lapho sihlonipha khona abaNakekeli.
Iyiphi inyanga enhle kunazo zonke yonyaka yomdlavuza?
I-CANCER INHLANHLA HOROSCOPE. NGO-SEPTEMBER 2019. (Incazelo yakho ye-Luck Factor ingezansi) Ama-Horoscopes asuselwa ku-Pacific Daylight Time (+7 GMT). Lungisa usuku ngaphambi noma ngaphambi kwendawo yakho yesikhathi. AmaCancer anenhlanhla kule nyanga azalwe ngoJulayi 15-22. I-Luck Factor yakho ingu-7 ezinsukwini zakho zeLuckiest kule nyanga: Septhemba 9-13.